L39horoscope မော်ကွန်းတိုက် - Tele RELAY တစ်ခု
တနင်္ဂနွေနေ့ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်၊ ဗွီဒီယို
L'horoscope du jour အား Christine Haas နှင့်အတူ ၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်တွင် RTL.fr. တွင်ရှာပါ။ https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/l-horoscope-du-dimanche-23-fevrier-2020-23 ဒီဗီဒီယိုတွင်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက်၊ ၂၀ ရက် ၂၀၁၂ ၏နေ့စဉ်အာကာသစခန်း - ဗီဒီယို
L'horoscope du jour အား Christine Haas နှင့် ၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်တွင် RTL.fr. တွင်ရှာပါ။ https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/l-horoscope-du-08-fevrier-2020-8 ဒီဗီဒီယိုသည်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်
ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်၊ ၂၀၂၀ horoscope - ဗီဒီယို
၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်မှ RTL.fr. တွင် Christine Haas နှင့် L'horoscope du jour နှင့်ရှာပါ။ https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/l-horoscope-du-01er-fevrier-2020-1 ဒီဗီဒီယိုသည်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်
၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်အတွက်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဖြစ်စဉ် - ဗီဒီယို
၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်မှ RTL.fr. တွင် Christine Haas နှင့် L'horoscope du jour နှင့်ရှာပါ။ https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/l-horoscope-du-30-janvier-2020-30 ဒီဗီဒီယိုမှာပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်မှ RTL.fr. တွင် Christine Haas နှင့် L'horoscope du jour နှင့်ရှာပါ။ https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/l-horoscope-du-28-janvier-2020-28 ဒီဗီဒီယိုမှာပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
Tele RELAY တစ်ခု ဇန်နဝါရီ 22, 2020 0
RTL.fr. တွင် ၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီ ၂၂ မှ Christine Haas နှင့် L'horoscope du jour နှင့်ရှာပါ။ https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/l-horoscope-du-mercredi-22-janvier-2020-22 ဒီဗီဒီယိုသည်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်၊ ၂၀ ဝ ၂၀ ရက် horoscope - ဗီဒီယို
RTL.fr. တွင် Christine Haas နှင့်အတူ L'horoscope du 19 janvier 2020 ကိုရှာပါ။ ဒီဗီဒီယိုကို https://www.youtube.com/watch?v=0SMMakw9YdU တွင်ပထမဆုံးပေါ်လာသည်
၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်မှ RTL.fr. တွင် Christine Haas နှင့် L'horoscope du jour နှင့်ရှာပါ။ https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/l-horoscope-du-04-janvier-2020-4 ဒီဗီဒီယိုမှာပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်မှ RTL.fr. တွင် Christine Haas နှင့် L'horoscope du jour နှင့်ရှာပါ။ https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/l-horoscope-du-05-janvier-2020-5 ဒီဗီဒီယိုမှာပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်မှ RTL.fr. တွင် Christine Haas နှင့် L'horoscope du jour နှင့်ရှာပါ။ https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/l-horoscope-du-03-janvier-2020-3 ဒီဗီဒီယိုမှာပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။